सन्तान काखमा च्यापेर आन्दोलनमा छौं – News Portal of Global Nepali
सन्तान काखमा च्यापेर आन्दोलनमा छौं
24th January 2018 मा प्रकाशित
मनिषा विमली, संयोजक, सामाजिक परिचालक आन्दोलन समिति
नौ वर्षसम्म सामाजिक परिचालकको भूमिका निर्वाह गरेकाहरू यतिबेला सडक आन्दोलनमा छन् । साविकको जिल्ला विकास समितिअन्तर्गतका सामाजिक परिचालकले स्थानीय तहमा आफूहरूलाई समायोजित गरियोस् भनेर आन्दोलन गरिरहेका हुन् । विदेशी दाताको सहयोगमा चलेको कार्यक्रम भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै कार्यक्रम पनि सकिएको छ । सरकारले अब थप समय राख्न नसक्ने निर्णय सुनाइदिएपछि सामाजिक परिचालक आन्दोलनमा उत्रेका छन् । नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघको अगुवाइमा आन्दोलन भएको हो । आन्दोलनको संयोजन गरिरहेकी मनिषा विमलीसँग गरिएको कुराकानी ः
० तपाईंहरूको आन्दोलन किन ?
– विगत नौ वर्षदेखि स्थानीय तहमा काम लगाइएका थियौ । पुस १४ गते राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णय भनी सामाजिक परिचालकलाई जागिरबाट हटाइयो । एक दशकसम्म काम गरेका सामाजिक परिचालकलाई एक पन्ने कागजमा तपाईंहरूले काम गरेको मूल्यांकन गर्दै धन्यवादसहित अवकाश दिएपछि हामी आन्दोलनमा उत्रेका हौं ।
० ठाडो नियुक्ति, ठाडै हटायो होइन ?
– होइन, सामाजिक परिचालक कार्यविधिबमोजिम प्लस टु पास गरेको, समाजसेवा क्षेत्रमा दुई वर्ष काम गरेको अनुभव भएको, अन्तर्वार्ता र लिखित दुवै परीक्षा दिएर स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालक खटाइएको हो ।
० तपाईंहरूले के काम गर्नुभयो ?
– हिजो जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सामाजिक परिचालकलाई दिइएको थियो । टोल सुधार, उपभोक्ता समिति, नागरिक वडा मञ्चलगायतसँग मिलेर हामी काम गथ्र्यो ।
० कस्ता व्यक्ति सामाजिक परिचालक हुनसक्थे ?
– सामाजिक परिचालक कार्यविधिअनुसार नियुक्त भएका व्यक्ति सामाजिक परिचालक हुन् । उनीहरू स्थानीय हुन्थे र स्थानीय तहमै बसेर काम गर्नुपथ्र्यो ।
० तपाईंहरूले राज्यलाई सुनाउन खोजेको के ?
– झन्डै एक दशकसम्म काम गरिसकेका सामाजिक परिचालकलाई कागजको धन्यवादले मात्र पुग्दैन । उनीहरूलाई उमेरको हदबन्दी नलगाई, स्थानीय तहमा योग्यताअनुसार निजामती कर्मचारीमा समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
० तपाईंहरूको कुरो राज्यले सुनेको छ त ?
– एक दशक राज्यको सेवा गरेको मूल्यांकन धन्यवाद मात्र हो ? सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेका सामाजिक परिचालकलाई स्थानीय तहले अहिले पनि सोधीखोजी गर्छ ।
० निर्वाचित जनप्रतिनिधिभन्दा तपाईंहरू प्रभावकारी हो र ?
– जनप्रतिनिधिहरू पनि स्थानीय नै हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई हामीले नै मतदान गरेर निर्वाचित गरेका हौं । हामीले प्रत्येक घरमा पुगेर मतदान गर्नुपर्छ भनेर निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम चलायौं । उहाँहरूको काम छैन, चिनेका छैनौं भनेर हामीले भनेका छैनौं । उहाँहरू हाम्रो कामको प्रकृति नै फरक छ ।
० स्थानीय तहमा तपाईंहरूलाई भूमिका चाहियो ?
– हामीले भूमिका खोजेका होइनौं । हामीलाई कर्मचारीमा समायोजन गर्नुपर्छ भनेका हौं ।
० सरकारले दिएको धन्यवाद पत्र बुझ्नुभयो ?
– बुझेका छैनौं । समाचारमा पत्र देखेका हौं, त्यही समाचारमा देखेको पत्रका आधारमा हामी आन्दोलनमा गएका हौं । कतिपय नगरपालिकाले तपाईंहरूको काम सकियो, भोलिदेखि नआउनू भन्ने पनि सुनियो । काठमाडौं महानगरको हकमा मेयर विद्यासुन्दर सकारात्मक भएको पायौं, उहाँले आर्थिक व्यवस्थापनका बारेमा छलफल भइरहेको हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ । काठमाडौं महानगरसँग मात्र जोडिएको कुरा होइन, करिब पाँच हजार सामाजिक परिचालक छौं । ऊसँग जोडिएका पाँच लाख परिवारको पेटमा त्यति सजिलै लात मार्नु राम्रो कुरा होइन होला ।
० तपाईंहरूमा राज्यको लगानी छैन ?
– राज्यको धेरै लगानी छ, हामीलाई तालिम दिएको छ, कामको अनुभव छ । हो त्यही कारण हामीलाई हटाउनु हुँदैन भनेका हौं । हामीलाई हटाउने निर्णय गलत भएको छ ।
– आन्दोलन हाम्रो रहर होइन, तर अहिले आफ्ना सन्तान रुवाउँदै सडक आन्दोलन गर्न राज्यले हामीलाई बाध्य बनायो । दुर्गमबाट राजधानीमा केन्द्रिकृत भएर आन्दोलन गर्नु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो । हाम्रो कामको मूल्यांकन गरेर सरकारले वार्तामा बोलाउनुपर्छ । हाम्रो माग भनेको एकपटक उमेरको हदबन्दी नलगाई हामीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गरियोस् ।
० सहरमा भन्दा गाउँमा सामाजिक परिचालनक आवश्यक पर्ने भो ?
– होइन, काठमाडौं उपत्यकालाई किन सामाजिक परिचालक आवश्यक छैन ? सहर र गाउँको गरिबी समाजमा आएपछि मात्र थाहा हुन्छ । हिजो हामी पनि सहरमा गरिबी हुँदैन भन्थ्यौं, तर समाजमा भिज्दै गएपछि त्यस्ता कुरा देखिँदो रहेछ । उपत्यकामा जन्म र मृत्यु दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानसमेत रहेनछ ।
० कर्मचारी समायोजन गर्दा लिइने परीक्षामा फेल भए ?
– खुला प्रतिस्पर्धाबाट हामी आउँदैनौं । हामीलाई वार्तामा बोलाएर सरकारले सिस्टममा लिने हो भने हामीबीच आन्तरिक प्रतियोगिता गराउनुपर्छ ।
० खुलामा जान किन डराउनुभएको ?
– खुलामा जाने हो भने किन आन्दोलन गर्नू ? खुलामा प्रतिस्पर्धा गराउँदा हाम्रा ३० प्रतिशत साथीहरू पनि समेटिँदैनन । किनभने धेरैको उमेरहद नाघिसकेको छ । नौ वर्षदेखि काम गरेको सामाजिक परिचालक अहिले खुलामा कसरी सक्षम हुन्छन् ?